Sandals Foundation na-etinye owuwe ihe ubi na idebe mmiri ọcha maka ụlọ akwụkwọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Sandals Foundation na-etinye owuwe ihe ubi na idebe mmiri ọcha maka ụlọ akwụkwọ
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Grenada na -agbasa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Akpụkpọ ụkwụ Sandals
N'ihu mmalite nke afọ agụmakwụkwọ 2020/2021, ọrụ agaala n'ihu nke ọma iji bulie atụmatụ njikwa ụkọ mmiri wee bulie sistemụ nhicha n'etiti ụmụ ọhụrụ na ụlọ akwụkwọ praịmarị asaa gafee St. Ann, Hanover, St. James na Westmoreland. Na Jenụwarị, ogologo oge tupu Jamaica edekọtara ọrịa coronavirus mbụ ya, National Education Trust, site na nkwado nke Akpụkpọ ụkwụ Sandals malitere imejuputa atumatu ya bu “Owuwe ihe ubi na idebe ihe mmiri maka ulo akwukwo” dika otu n’ime oru iji wedata onodu onwu, mejuputa atumatu ugwo mmiri, ma melite ulo oru nhicha nke ihe kariri umuaka abuo n’ime nzuko ndi ano.
Ihe omume a bara uru karịa J $ 7 nde ma mee ka ọ kwe omume site na mmekọrịta na-aga n'ihu n'etiti Sandals Foundation na Coca Cola.
Shirley Moncrieffe, Director nke Mmụta Ihe Enyemaka na National Education Trust, na-ekwu na mmemme mmiri na idebe ihe ọcha dị oke mkpa n'ịkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụ na ụba, na ahụike.
"Enweghị mmiri nwere mmetụta na-emerụ ahụ na ndụ obibi nke ụmụ anyị n'ihi na ọ bụghị naanị na-akpata ọrịa dị iche iche, mana ọ na-enye aka na adịghị ọcha na ịdị ọcha ma na-alaghachi nsonaazụ agụmakwụkwọ."
Site na oru a, Moncrieffe kwuru, "Anyị na-achọ iji hụ na ụmụaka dị afọ 4 ruo 12 nwere ezigbo mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, ụlọ mposi zuru oke na ebe a na-asa aka, yana belata mmetọ nke anwụnta na ọrịa."
Schoolslọ akwụkwọ bara uru bụ Cocoon Castle Primary & Infant School yana Success Primary & Infant School na Hanover, Holly Hill Primary & Infant School, Kings Primary & Infant School na Westmoreland, Lime Hall Primary & Infant School na St. Ann, na Farm Primary & Mụaka Schoollọ Akwụkwọ na St. James. A ga-emecha ụlọ akwụkwọ nke asaa na izu ndị na-abịanụ.
Ugbu a, ka afọ agụmakwụkwọ agwaetiti ahụ chọrọ ịmaliteghachi na eziokwu ọhụrụ nke ọrịa zuru ụwa ọnụ COVID-19 mara, mmiri na usoro nchekwa na-adịgide adịgide dịkwa mkpa karịa.
"Usoro ndị a ga-akwado nkwado nke ndị nkuzi na ndị nne na nna iji zụlite omume ịdị ọcha siri ike n'etiti ụmụaka," ka Heidi Clarke, Executive Director na Sandals Foundation kwuru.
Clarke gara n'ihu kwuo, sị: “Nwatakịrị na ụlọ akwụkwọ praịmarị bụ oge ndị dị egwu na-eto eto ma na-eto eto. Sandals Foundation gbara mbọ iji hụ na anaghị egbochi ụmụaka oge klaasị n'ihi enweghị mmiri, yabụ site na iwusi akụ ndị ọzọ dị na mpụga nke a na-enye n'oge a dị oke mkpa, anyị nwere ike inye aka mee ka ụmụ anyị gbasie ike ma mepụta ntọala siri ike nke na-esetịpụrụ ha na nke ziri ezi na-aga. ”
Mmiri dị ọcha na ịdị ọcha yana Ezi Ahụike na Ọdịmma na-anọchi anya ebumnuche nke 6 na 3 n'otu n'otu Ebumnuche Sustainable Development nke Jamaica bụ onye na-edebanye aha yana onye na-arụsi ọrụ ike na ntinye.
Onye isi oru Sandals Foundation nabatara usoro ihe omume nke National Education Trust na-achota na “dika ndi Jamaica na-aga n’ihu na ebumnuche mba ya iji nweta Ebumnuche Nkwado Sustainable a, ọ dị oke mkpa ka onye ọ bụla nwere ike ime ihe anyị nwere ike ime iji kwalite ahụike na ọdịmma. nke ndị nọ n'afọ ndụ nile na ịmụba ohere inweta mmiri dị ọcha. ”
National Education Trust's Water Harvesting & Sanitation for Schools Project na-achọ ịwụnye usoro n'ime ụlọ akwụkwọ 344 nke ndị Ministry of Education, Youth and Information matala ka ha nwee mkpa dị mkpa maka ebe nchekwa mmiri.
Ozi ndị ọzọ si akpụkpọ ụkwụ